High Quality လူမီနီယမ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ - တရုတ် Youde ရှေ့ပြေးပုံစံ
န်ဆောင်မှုများ Casting Silicon မှိုဖုန်စုပ်
High Quality လူမီနီယမ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ
ကုန်ပစ္စည်းဖျေါပွခကျြဖော်ပြချက်: လူမီနီယမ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ Dimension: 60 * 60 * 40 မီလီမီတာသည်းခံစိတ်: +/- 0.05 မီလီမီတာ Surface ကကုသမှု: လက် polishing အရောင်: သဘာဝသို့မဟုတ်ထုံးစံလျှောက်လွှာ: ကျွန်တော်တို့ကိုရှေးခယျြအဘယ်ကြောင့်စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်း? 11-နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကိုထက် 1. ပို။ 2. ISO9001: 2008 certificated ။ 3. ယှဉ်ပြိုင်စျေးနှုန်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မား။ 4. စိတ်တိုင်းကျ R & D အစီအစဉ်ကိုညှိနှိုင်း။ 5. က Short ခဲအချိန်။ 6. ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းယဉ်ကျေးမှု။ 7. Wel ...
သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း: Shenzheng သို့မဟုတ် HongHong
ခဲအချိန်:5~ 12 ရက်
item အဘယ်သူမျှမ: 17052601 စမ်းသပ်လုပ်ဆောင်မှု
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: 50% ပေးပို့မတိုင်မီစာတိုက်နှင့်အတူ 50% အပ်ငွေ,
ဖော်ပြချက်: လူမီနီယမ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ Dimension: * 60 60 * 40 မီလီမီတာ
သည်းခံစိတ်: +/- 0.05 မီလီမီတာ Surface ကကုသမှု: လက်ချော
အရောင်: သဘာဝသို့မဟုတ်ထုံးစံ လျှောက်လွှာ: စက်မှုထုတ်ကုန်ပစ္စည်း
11-နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံကိုထက် 1. ပို။
2. ISO9001: 2008 certificated ။
4. စိတ်တိုင်းကျ R & D အစီအစဉ်ကိုညှိနှိုင်း။
5. က Short ခဲအချိန်။
YOUDE ရှေ့ပြေးပုံစံ 11 နှစ်များအတွက်လျင်မြန်သောရှေ့ပြေးပုံစံမှရည်စူးဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့လျင်မြန်စွာရှေ့ပြေးပုံစံဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကြွယ်ဝသောအတွေ့အကြုံရှိသည်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ပုံဆွဲခြင်းနှင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီသင့်လျော်သော CNC စက်နှင့်အတူဖြေရှင်းချက်, 3D ပုံနှိပ်ခြင်း, Silicon မှိုဖုန်စုပ်ပစ် Rapid tools ကို, လို့ရပါတယ် and make your idea be prototype in few days, it can save the cost and time for you.
Q1 ။ သင့်ရဲ့ MOQ ကဘာလဲ?
Re: အ 1pcs နှင့်ထို့ထက် ပို. ပိုကောင်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါသည်
Re: အကျနော်တို့စက်ရုံတစ်ရုံဖြစ်ကြောင်း, ကျနော်တို့က Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ 10 နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံများရှိသည်။
Re: အကို T / T က, စာတိုက်, ပို့ဆောင်မှုမပြုမီ 50% နှင့်အတူ 50% အပ်ငွေ; သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏအဘို့, ကျနော်တို့ဘဏ်ငွေလွှဲအခကြေးငွေကြောင့်စာတိုက်နှင့်အတူ 100% အပ်ငွေမှကြိုက်တတ်တဲ့။
Q4.What CAD မော်ဒယ် fomat ပိုမိုနှစ်သက်သလဲ?
Re: အ STP ပိုမိုနှစ်သက်နှင့် X_T IGS, STL သို့မဟုတ်အခြားရရှိနိုင်ပါသည်။
Re: အပန်းချီ (ပက်ဖြန်း), anodizing, အီး electroplating, brushed, sandblasing, ပုံနှိပ်ခြင်း, ပွင့်လင်း, စ, ရာဘာ, ဆေးသုတ်, ပြားစသည်တို့ကို
Re: အ ABS, polycarbonate (PC ကို), Delring (Pom အဘိဓါန်), PP, PA, PVC, PBT, PE, acrylic (PMMA), လူမီနီယံ (ကွဲပြားခြားနားသောတန်း), (ဆီလီကွန်မှိုအစိတ်အပိုင်းများအတွက်) PA ဆိုပြီး + 30GF, PU, ​​စာရွက်သတ္တု, ကြေးနီ, သံမဏိ, ဘေ့စ။
ယင်းကိုအောက်တွင်၌သင်တို့၏စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအသေးစိတ် Send, အခုတော့ "Send" ကိုနှိပ်ပါ!
ယခင်: ထုံးစံလူမီနီယမ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ
နောက်တစ်ခု: လူမီနီယမ် Rapid CNC စက်ပစ္စည်း
လူမီနီယမ် CNC စက်ရုံ
လူမီနီယမ် CNC ထုတ်လုပ်သူ
အနိမျ့ကုန်ကျစရိတ်လူမီနီယမ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ
Professional က CNC လူမီနီယမ်စက်ပစ္စည်း
အသေးစားငွေပမာဏလူမီနီယမ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ
ထုံးစံလူမီနီယမ် Rapid ရှေ့ပြေးပုံစံ
လူမီနီယမ် Rapid CNC စက်ပစ္စည်း